Ahoana ny fiasan'ny fitaovam-pikarohana Amazon izay mety hisy fiantraikany amin'ny lisitry ny fanatsarana ny vokatrao
Ny mpivarotra an-tserasera rehetra izay manara-maso ny orinasa momba ny varotra ecommerce dia mahalala fa ny vidiny dia afaka mametraka ny vokatrao amin'ny sehatra ara-barotra iraisam-pirenena Amazon. Amazon dia manome tombontsoa ho an'ireo mpivarotra sy mpivarotra. Izany no mahatonga azy tsy ho tara loatra raha manolotra ny vokatrao amin'ny Amazon raha manana tranonkala maromaro ianao na tsia - villas in malaga for sale	33.
Mba hampahafantarana ny vokatra azonao amin'ny alàlan'ny Amazon dia mila manangana fanentanana ara-barotra mahomby ianao. Tsara homarihina fa ny algorithma amin'ny alàlan'ny Amazon A9 dia tsy mitovy amin'ny zavatra hitantsika tao amin'ny Google. Amazona ny lanjany amin'ny ambaratongam-pahefana ary mamaritra vokatra avy hatrany ny Amazon. Midika izany fa manana vintana hampitomboana ny fidiram-bola rehetra amin'ny banky Amazon ny mpividy Amazonana ary manintona kokoa lavitra kokoa noho ny amin'ny tranonkala marika. Na dia izany aza, amin'ny fifandraisana e-varotra tahaka izany, tsy ampy ny mametraka ny vokatrao ary miandry ny varotra, na dia fantatrao tsara aza ny marika. Noho izany, mba hahazoana antoka fa ho hitan'ny mpihaino anao ny vokatrao, dia mila mampiasa ny fotoanao sy ny ezaka amin'ny fikarohana teny fikarohana ianao, ary manao lisitra fanatsarana. Ankoatr'izay dia tsara ny mampiasa ny iray amin'ireo programa momba ny varotra Amazon (Amazon Vendor Central, Amazon Seller Central, Amazon Vendor Central Express) izay hanome fahafaham-po tanteraka ny filan'ny orinasa.
Amin'ny maha-mpivaro-drivotra Amazona anao, betsaka loatra ny zavatra ataonao, toy ny fikarohana, ny fitadiavana, ary ny tolotra fitantanana. Raha manana vokatra be dia be ianao, dia ho sarotra ny hitantana azy ireo amin'ny ankapobeny. Mila rindrambaiko fanaraha-maso matihanina ianao mba hanampy anao hahomby.
Amin'ity lahatsoratra ity, dia hampahafantariko anao ny fitaovana fikarohana sy fitadiavana matihanina izay hanampy anao hampitombo ny lalao eo amin'ny Amazon ary hahasarika loka kokoa.
TOP AMERIKA fitaovana afaka mampiakatra ny vola miditra amin'ny Amazon
) Raha te hahazo fampahafantarana marina mikasika ny vokatra sy ny sokajy nichey malaza amin'ny Amazon, ny Jungle Scout dia ho tsara indrindra aminao. Ity fitaovana fikarohana ity dia manampy ny hahita Amazon ahafahanao mahazo tombony. Ny Jungle Scout dia manangona ny angon-drakitra azo tsapain-tanana Amazon amin'ny indostria mba hanampy anao hisoroka ny fahadisoana ara-barotra. Ity fitaovana ity dia ahitana traktera mpanamboatra izay natao mba hamonjena ny fotoana ahafahanao mandany ny fikarohana. Ankoatra izany, afaka mampiasa ity fitaovana ity ianao amin'ny fitsikilovana ny mpifaninana nicheo. Ary, farany, ny ampahany tsara indrindra amin'izany dia ny ahafahanao manadihady ny ranon'i Nish mba ahafahana mampihena ny fidiram-bola miafina miafina. Raha toa ka mampiasa ny Jungle Scout ho fampivoarana Chrome ianao, dia azonao atao ny mijery ny vokatra avy amin'ny vokatra ao amin'ny pejin-tranonao. Ho nomena ny vidin'ny vokatra tsirairay, ny varotra nividianana, ny fanisana ary ny maro hafa. Hanampy anao hanao fampitahana amin'ny vokatra tsara amin'ny sidina izany.
Noho izany, ny Jungle Scout dia afaka manampy anao ho ao amin'ny TOP ao amin'ny toeram-pivarotana Amazon-tsena ary mandanjalanja ny mpifaninana nicheo.
Most shoppers use Google search to find Amazon entana. Voalohany indrindra, nampidirin'izy ireo ny anarana hoe Amazon amin'ny boaty fikarohana Google, ary avy eo dia miseho amin'ny pejy am-pikarohana Amazon. Ny Semalt Amazon SEO dia manampy amin'ny fanatsarana ny lanjan'ny lisitry ny vokatra Amazon ao amin'ny TOP OF Google SERP. Miaraka amin'ny teknolojia tsy manam-paharoa amin'ny fananganana rohy ankapobeny, dia i Semalt no mampifandray amin'ny Google ny pejy momba ny vokatra miaraka amin'ireo fehezanteny fototra ilainao manangona ny fivarinao amin'ny vokatra TOP. Azonao atao ny mandidy enim-bolana na herintaona an-tsoratra izay hampiditra soso-kevitra toy ny soso-kevitry ny sokajy matihanina, fanentanana fananganana rindrambaiko mahomby, hatramin'ny 100 karoka fikarohana ao amin'ny Google TOP10, fanatsarana ny fanombanana, misy ny SEO sy ny fanitsiana. Ny tsara indrindra dia ny hahafahanao mahazo fanohanana matihanina avy amin'ireo manam-pahaizana manokana momba ny Semalta.
Noho izany, raha te-hanakombom-bava ireo mpifaninana aminao ianao ary hahazo ny tsimok'aretin'ny mpanjifa maimaim-poana avy amin'ny loharanom-pifaneraserana lehibe indrindra amin'ny Internet, dia hanome fahafaham-po ny zavatra rehetra ilainao amin'ny Business.
Optimization. Izy io no voalohany mpitsikilo tenimiafina Amazon, noho izany dia mety matotra kokoa noho ny toy ny fitaovana fitadiavam-pitaterana fanadinana fifaninanana. Ity fitaovana ity dia manampy amin'ny fitomboan'ny filaharana ary mitazona azy ireo ho an'ny fotoana maharitra. Araka ny tetikadin-dRavalomanana AMZ Tracker, azonao atao ny manatratra haingana ny pejy voalohany amin'ny fampiroboroboana, fanatsarana ny fiovan'ny toetr'andro, ary ny fanadihadiana amin'ny fifaninanana. Manome anao ny angon-drakitra momba ny lahatsoratry ny vokatrao amin'ny vokatrao ianao ary mandanja ny vokatra avy amin'ny mpifaninana aminao mba hahafahanao mahita rehefa manao fiovana izay miasa. Ambonin'izany, ny AMZ Tracker dia miara-miasa amin'ny vondron'orinasa lehibe indrindra ao amin'ny Amazon Amazon Vipon. com izay mamela ireo mpivarotra mifantoka amin'ny mpanjifa an-tapitrisany. Ny soa hafa dia ny AMZ Tracker dia afaka manatsara ny lisitry ny vokatrao. Ny AMZ Tracker ao amin'ny pejy Analyzer dia mampiseho ireo teboka matanjaka sy malemy eo amin'ny lisitry ny vokatra misy anao amin'izao fotoana izao, ka manome anao ny fahafahana hanitsy. Ankoatra izany, Amazon dia manome fahafahana hanara-maso ireo fanamarihana ratsy ary manitsy ny tatitra an-tserasera.
Ity fitaovana ity dia mampiseho anao ny teny manan-danja indrindra hitady ny vokatrao na ny zavatra mifandraika amin'izany ao anatin'ny lasitra. Ny tahirin-keviny dia ahitana teny maherin'ny 170 tapitrisa. Ity fitaovana ity dia mifanaraka tsara amin'ny mpivarotra izay te-hampitombo ny fivarotana ny vokatra ao Amazon. Ny rindrambaiko Words Hivosiana dia manampy amin'ny famoahana fehezan-teny tena manan-danja manokana izay azon'ny mpanjifanao atao mba hahitana vokatra manokana. Mora kokoa ny mametraka azy amin'ny fehezanteny satria tsy mifaninana be loatra izy ireo. Ankoatra izany, amin'ny fampiasana ity fitaovana ity dia afaka manonona teny fanalahidy avy amin'ny tsena iraisam-pirenena ianao. Ny rindrambaiko Words Hivarotra dia manome fahafahana miditra amin'ny mpihaino manerantany miaraka amin'ny antontan-kevitra momba ny fikarohana avy amin'ireo mpividy avy amin'ny firenena Eoropeana sy Aziatika. Miaraka amin'ny Word Merchant Word dia azonao atao ny mamolavola download farany CSV mba hampidirana io rakitra io amin'ny rafitra rehetra ampiasainao amin'ny fomba mahomby. Ary amin'ny farany, amin'ny fampiasana ity fitaovana ity dia afaka mahazo fanohanana mpanjifa ianao.
Ny Keyword Tool dia sehatra fikarohana momba ny fikarohana malaza Amazon izay manampy amin'ny mpivarotra an-tserasera Mamorona teny fohy mahazatra mifandraika amin'ny fampiasana fikarohana Amazon fikarohana. Ity fitaovana ity dia mametraka ny fomba amam-panaovan'i Amazon mba hamoronana teny an'arivony tapitrisa mahazatra ny teny filamatra momba ny lisitra ho an'ny Amazon lisitry ny fanatsarana. Ireo Amazon mpivarotra izay te-hahazo fahafahana misimisy kokoa, dia tsy isalasalana fa hahazo tombontsoa amin'ny Keyword Tool Pro amin'ny safidy Amazon. Na dia izany aza, ireo singa toy ny fanaraha-maso ny teny fanalahidy faratampony dia tsy afaka mahazo ireo mpampiasa Amazon Keyword Tool.